IPhone X Mockups | Hal-abuurka khadka tooska ah
Maadaysku waa hab aad u faa'iido badan oo lagu eegi karo shaqada naqshadeynta, gaar ahaan markaad rabto inaad siiso sawir awood badan. Way caddahay in majaajilada sidoo kale ay ku kala duwan yihiin hadba isbeddellada iyo horumarinta tignoolajiyada, dhammaantood waxay leeyihiin baahi ku xiran badeecadaha suuqa. Mararka qaarkood way adag tahay in la helo template gaar ah marka aad raadinayso nooc gaar ah. Taasi waa sababta, boostada maanta, aan u samaynay mid ka mid ah taleefannada ugu iibka badan ilaa hadda: iPhone X.
Way caddahay in nashqaduhu uu u muuqdo mid aad u qurux badan oo leh majaajillo tayo leh iyo xitaa in ka badan haddii ay tahay mid ka mid ah astaanta sida loo yaqaan Apple. Tani waxay kor u qaadi doontaa naqshadahaaga heer kale, kaas oo laga yaabo inaadan ku gaadhi karin moodallo kale. Maadaysyada aan hoos la wadaago, Inta badan waxaa lagu sameeyaa Photoshop si ay si buuxda u tafatiran karaan. Qaar waxay u baahan yihiin sifo laakiin waa shay aan waxba ku kacayn in la sameeyo, ka dib waa shaqada dadka kale. Hoos waxaa ah xulashada bogagga shabakadda iyo xulasho yar oo majaajillo ah oo loogu talagalay iPhone X, oo ka socda bogaggan.
1 Adduunka Majaajilada
1.0.3 Majaajilo leh hadh loogu talagalay iPhone X
1.0.4 Sabbaynaysa iPhone X Mockup oo leh Milicsi
2.1 Mockup-ka hore ee iPhone X
2.2 Gacanta ku haysa iPhone X
3.2 Gacmaha Mockups (iPhone + MacBook Mockups)
Dunida Mockup shaki la'aan waa mid ka mid ah boggaga ugu fiican ee lagu soo dejiyo majaajillo tayo sare leh. Waxaa jira kiisas halkaas waa inaad xisaabta ku dartaa shatiyada, maadaama qaarkood loogu talagalay isticmaalka shakhsi ahaaneed oo keliya, laakiin taasi had iyo jeer waa mid faahfaahsan oo ku saabsan sharraxaadda majaajilada. Xaaladda ugu xun, waa inaad magacawdaa qoraaga oo keliya, si aad ugu ammaanto shaqadiisa iyo inaad awood u leedahay inaad isticmaasho majaajilooyinkiisa.
Jees-jeeskani waxa uu leeyahay muuqaalka hore ee iPhone X oo madow. Ka kooban yahay faylka PSD, kaas oo loo sameeyay si tayo sare leh. Waxay cabbirtaa 4000 x 3000 x px. Oo waxay leedahay xallinta 300 dpi. Sidoo kale waxaa ku jira walxo xariif ah, taasi waxay kuu sahlaysaa inaad tafatirto. Waxaad ka soo dejisan kartaa isku xirkaan
Waa xirmo majaajillo ah halkee iPhone X wuxuu ku yaalaa meelo kala duwan. Mid kasta oo ka mid ah faylalka waa 3000 x 3000 px, si buuxda loo tafatiran karo, lakabyo iyo qalabaysan walxo xariif ah. Halkan waxa aad leedahay download link.
Majaajilo leh hadh loogu talagalay iPhone X
Jees-jeeskani waa loogu talagalay bandhigyada abka iyo naqshadeynta shabakadda. Waa a faylka psd, midabka asalka ah si buuxda ayaa loo tafatiri karaa, oo leh shay caqli badan. Waxay leedahay cabbir 2362 x 1653 px ah iyo xallinta 300 dpi.
Sabbaynaysa iPhone X Mockup oo leh Milicsi
jeesjeeskan Waxaad awoodi doontaa inaad aragto hore iyo gadaal ee iPhone X. Muuqaalka cajiib ah ee majaajiladani waa taas IPhone-ka ayaa sabbaynaya hawada. Lakabka shayga caqliga leh ee faylka PSD waxaad awoodi doontaa inaad bedesho sawirada gadaasha. Waxay leedahay cabbir 1723 x 1743 px.
Freepil waa a website ka kooban in ka badan 10 milyan oo ilo garaaf, dhamaantood tayo sare leh. Waxaad ka heli kartaa wax walba laga bilaabo sawiro, sawiro ilaa faylalka PSD si buuxda loo tafatiran karo. Aad bay u fududahay in la isticmaalo, sababtoo ah kaliya adigoo ku dhejinaya waxaad raadineyso, mashiinka raadinta wuxuu sameyn doonaa isku-dubarid dhammaan walxaha ku habboon raadintaada. Hubaal ka mid ah kuwa ka badan 10 million khayraadka, waxaad ka heli doontaa waxa aad raadinayso.
Mockup-ka hore ee iPhone X
Majaajiladaan waxaad ku arki kartaa iPhone X booska hore. Haddii waxa aad raadinayso waa a design ugu yar, midabyo dhexdhexaad ah ayaa adiga kuugu habboon. Sidaan horeba u sheegay, waxa jira habab u baahan in qoraaga loo tiirsado. Tani gaar ahaan waa mid iyaga ka mid ah, waxaad sidoo kale bixin kartaa nooca premium ee Freepik si aad uga fogaato inaad u tilmaanto qoraaga, laakiin taasi adiga ayay kugu xirnaan doontaa. waan kaa tagayaa download link.
Gacanta ku haysa iPhone X
Sidaad ciwaanka ugu akhriday jees jeeskan hal gacan baa lagu hayaa. Marar badan, ku darida qayb ka mid ah jidhka bini'aadamka waxay soo saartaa dareenka isu-dhowaanshaha. Midabka asalka ah iyo kan dambe ee shaashadda mobilada labaduba waa kuwo si buuxda loo tafatiran karo. Halkan ayaad leedahay linkiga si aad u soo dejiso.
Dribble waa a bulshada khadka tooska ah ee naqshadeeyayaasha garaafyada. Waxay u shaqeysaa sidii madal is-kor-u-qaad ah oo loogu talagalay dhammaan noocyada shaqada hal-abuurka ah: naqshadeynta garaafyada, naqshadeynta shabakadda, sawir-qaadista ama sawir-qaadista iyo kuwa kale. Waxaa la abuuray 2009-kii Dan Cederhol iyo Rich Thornett. Si aad u isticmaashid waxa kaliya oo aad u baahantahay in aad isdiiwaangaliso, diiwaan galintu waa bilaash.
Haddii waxa aad raadineyso ay yihiin a iPhone X majaajilo cad, tani waa ku habboon. Waa template xarrago leh, kaas oo naqshadahaagu ay qaadan doonaan marxaladda dhexe. Tani waa download link.
Gacmaha Mockups (iPhone + MacBook Mockups)
Sameeyayaasha majaajiladaan waxay go'aansadeen inay abuuraan maaweeladan iyagoo leh laba ujeedo, waxay rabeen inay muujiyaan matalaadda dhabta ah ee maqaarka. Waxay aad ugu dheeraadeen inay ku jiraan da'da, jinsiga, iyo nooca jirka. Waxaan dhihi karnaa waa majaajilo loo dhan yahay. template this waxa kale oo ay ka kooban tahay macabook majaajilo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Iphone X Mockups
Tusaalooyinka Animation CSS